Kuongororwa kwehutano hwekubatsirwa kweNew Powerful Nootropic Coluracetam muBrain- Shangke Chemical
Kuongorora kwehutano hweMubatsiro weNew Powerful Nootropic Coluracetam muBongo
Coluracetam inozivikanwawo seCBI-540 kana 2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) -N- (2, 3-dimethyl-5, 6, 7, 8-tetrahydrofuro2, 3-b quinolin-4-yl) aimbova acetoamide inozivikanwa seMKC-231. Coluracetam ndeye nyowani yekugadzira nootropic kubva kumhuri ye racetam zvisinei, iyo yakasimba nootropic yakagadzirirwa mukuvandudza ndangariro uye yakajairika yekuziva kushanda.
Coluracetam inonyanya, yekudya kuwedzera yakawanikwa kubva piracetam. Coluracetam yakatanga kugadzirwa neMitsubishi Tanabe Pharma Corporation muna 2005. Vakazvigadzira semushonga unokwanisa kurapa chirwere cheAlzheimer. Kunyangwe iwo ekutanga mhedzisiro yakaratidza zvimwe zvinogona, vakatadza kusvika kumagumo.
Gare gare rezinesi rakachinjirwa kuBrainCells Inc. iyo yakaigadzira kurapwa kwekushungurudzika kwakanyanya (MDD) uye generalambudzika kusagadzikana (GAD). Vakasvika padanho 2a kiriniki zvidzidzo izvo zvakataura zvimwe zvingangoita mukudzora varwere kubva mukushungurudzika kwakakura kushungurudzika pamwe nekubva mukufunganya.
Zvine kusuwa, Brain Cells Inc. haina kukudziridza zvizere uye zvakare kambani yakavharwa muna 2014. Coluracetam yakange yave kuwanikwa rezinesi kubvira 2012.
Pasinei nezvose izvi, coluracetam inoonekwa seine simba kwazvo nootropic imba. Iyo inowanzo kukurumidza-kuita sezvo inogona kusvika yakakwirira kwazvo muropa mukati memaminitsi makumi matatu yekunwa. Nekudaro, iwo matanho anodzikira mukati memaawa matatu ekushandiswa izvo zvinoreva kuti mumwe anowana mapundutso akakwana mukati memaawa matatu ekushandiswa.
Kungofanana nemamwe majaho, coluracetam inowedzera iyo acetylcholine mazinga, zvisinei maitiro ayo ekuita anomira kunze. Coluracetam inonyanya kuvandudza iyo yakakwirira kubatana choline uptake (HACU) maitiro nekudaro inowedzera kushandurwa kwe choline kune acetylcholine. Iyo neurotransmitter, acetylcholine, inosanganiswa nebasa rekuziva uye ndangariro, saka kugona kwecoluracetam seyenropropic.
Izvo zvimwe zvakanaka zvinosangana necoluracetam zvinosanganisira kuvandudza kuona, kuwedzera kunzwisisika uye kusununguka kuyeuka, kukwidziridza manzwiro, kusunungura kubva kunetseka uye kushushikana pamwe nechinhu chekuvaka muviri.
Coluracetam inowanikwa mukati kubva pahwendefa f, makapu kana mvura. Inogona kutorwa nemuromo kana kuita zvishoma. Coluracetam is-fat-soluble nootropic uye nekukurumidza kunyorera kunofanirwa kushandiswa pamwe nehutano mafuta / mafuta akadaro semhandara yemafuta emuorivhi.
Iyi nootropic inoshanda mukati menguva pfupi kwazvo sezvo inosvika padanho rakakwira mu plasma mukati memaminetsi makumi matatu mushure mekutonga.
Chii chinonzi Coluracetam?
Coluracetam ndeyekugadzira uye mafuta-inosungunuka nootropic yakakomba mumhuri ye racetam. Coluracetam inozivikanwawo se BCI-540 yaimbove ichinzi MKC-231.
Kunyangwe iri chiitiko chitsva chakaringana, iyo coluracetam nootropic zvakanaka iri kuvimbisa. Iyo inofungidzirwa kupa yakakura mabhenefiti mukuvandudza ndangariro, kudzidza, kudzikisa kushushikana, chikuru chinoshungurudza kusagadzikana pamwe nekuvandudza maonero.
Coluracetam michina yekuita
Coluracetam inoshanda sei muuropi?
Kungofanana nemamwe marangi, coluracetam inobatsira uropi nekukanganisa choline uye yakazotevera acetylcholine nenzira dzakasiyana. Tsvagurudzo kusvika parizvino yakaitwa inoratidza kuti coluracetam mhedzisiro iri muuropi kuburikidza nematanho makuru matatu ehurongwa. Aya coluracetam masisitimu ezviito akajekerwa pazasi;
(1) Kutsigira yakakwirira-kuwirirana choline kutora
Nootropics mune iyo racetam kirasi inozivikanwa yekukonzera kugadzirwa kweacetylcholine nekumutsidzira ane mutoro ma receptors. Zvisinei, iyo coluracetam michina yekuita yakasarudzika mune iyo inosimudzira kugadzirwa kweacetylcholine nekusimudzira iyo yakakwirira kubatana choline kukwira (HACU).
Iyo HACU system ndiyo yepakati nzira iyo choline inotakurwa kuenda kuhuropi. Iyo ndiyo chaizvo nhanho-inodzikira nhanho mukati mekugadzirwa kweacetylcholine. Acetylcholine ndiyo neurotransmitter inosanganiswa nekuyeuka, kudzidza uye yakajairika yekuziva kushanda.
Coluracetam zvokuwedzera inowedzera chiyero icho choline inoendeswa muuropi zvichikonzera kugadzirwa kwakawanda kweacetylcholine. Inonyatso kuwedzera CHT1, yakakwira-yakabatana choline mutakuri, saka inotungamira mukuwanika kwakanyanya kwecholine yekutora.
Kana iri yekuputswa kweHCU, mumwe anoona izvo zvinotsanangurwa sehuropi hwemhasuru mhedzisiro uye nyaya nekuyeuka nekudzidza. Coluracetam inonakidza inowedzera huwandu hwe choline mune plasma yeropa iyo inobatsira iyo HACU system kushanda zvakanyanya, kunyangwe kana mamwe ma neuron akakuvara.
Iyo yakawedzera acetylcholine kugadzirwa muuroni kunobatsira kuwedzera pfupi uye kwenguva refu ndangariro, kudzidza, pamwe nekuita sarudzo kuita zvirinani.
(2) Kuvandudza AMPA potentiation
Tsvagurudzo yakaratidza kuti coluracetam inogona kuvandudza alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid (AMPA) potentiation. AMPA receptors inokurudzirwa ne glutamate iyo inokanganisa iyo yakareba-potentiation (LTP) iyo inoumba hwaro hwekudzidza nekurangarira.
Parizvino, Serotonin Selective Reuptake Inhibitors (SSRIs) ndiyo mishonga inoshandiswa pakurapa kusagadzikana kwemweya uye kushungurudzika. Aya maSSRIs, zvisinei, anokanganisa iye serotonin mazinga muuropi ayo anokonzeresa akawanda akaipa mhedzisiro.
Coluracetam inouya inobatsira kuitira kurapwa kwekushungurudzika kushungurudzika uye kunetseka nekuvandudza glutamate chiitiko saka hachikonzerese chero chinhu chinopesana neserotonin.
(3) Kuchengetedza NMDA receptors kubva mukukuvadza kwe glutamate chepfu
Chimwe chinogona kuitika coluracetam chiito chekuita ndiko kuchengetedza iyo N-Methyl-D-aspartate (NMDA) receptors kubva ku glutamate toxicity. Iyo NMDA receptor ndeye glutamate receptor uye zvakare ion chiteshi cheprotein chiri kuitika mumasero eve nerve. NMDA receptor inoita basa rakakosha mukutonga kweiyo synaptic plasticity uye nemabasa ekurangarira.
Kukuvadzwa kune NMDA receptors kwakabatana nekukosha kwehuropi hwepfungwa sekurova, kurwadzisa kweuropi kukuvara, chirwere cheAlzheimer pakati pezvimwe zvikonzero zveuropi.
Coluracetam tsvagiridzo inozviziva sesimba nootropic mumiririri pamwe neakanaka macoluracetam zvakaitika nevashandisi vawo '. Coluracetam inoyevedza yekuziva inosimudzira nekuda kwayo kwakatanhamara mashandiro ekuita. Nekudaro, sezvo iri mukomboni nyowani zvimwe zvidzidzo muvanhu zvichidikanwa kusimbisa iyo coluracetam mabhenefiti akajekeswa.
Pasi apa coluracetam inobatsira izvo munhu anogona kuona kubva mukuenderana uye kwakakodzera kushandiswa kwecoluracetam;
(1) Kuvandudza Memory uye Kudzidza
Coluracetam inowedzera kugadzirwa kweiyo neurotransmitter, acetylcholine inosanganiswa nekudzidza uye ndangariro.
Kuverengeka kweongororo kunoratidza kuti coluracetam inogona kukwidziridza ndangariro uye nekuziva basa mumakonzo. Nekudaro, izvo zvidzidzo hazvina kumboitwa nezvidzidzo zvevanhu asi mhedzisiro yacho inogona kunge yakafanana.
Semuenzaniso, mune yekudzidza makonzo aine kukosora ndangariro kushomeka, iko kudomwa kwemuromo wecoluracetam pa 1-10mg / kg kwakawanikwa kunatsiridza ndangariro pasina kukonzera mhedzisiro yakaipa.
Ongororo yeColuracetam inoratidza kuti inogona kuvandudza pfupi uye yenguva refu yekuyeuka.
(2) Kuvandudza Kuverenga Kunzwisisa uye Mahara Yeuka
Coluracetam zvokuwedzera inogona kuvandudza pfupi-yenguva ndangariro, kusimudzira kutarisisa pamwe nekurangarira kwepachena. Izvi zvinogonesa vadzidzi uye chero munhu ari munzvimbo yemakwikwi kuvandudza mashandiro avo.
Several coluracetam zviitiko nemunhu mumwe nemumwe vashandisi vanoratidza kugona kweColuracetam yekuwedzera kushanda kuburikidza nekunzwisisa kuverenga kwakanaka pamwe nekuyeuka kwemahara kwezvinhu zvakadzidziswa.
(3) Yakareba Kugadziriswa Kwekunzwisisa Kunatsiridza
Coluracetam inonzi inofambisa iyo choline inotora dhairekitori nekudaro ichiwedzeredza basa rekunzwisisa kwenguva refu mushure mekutarisira kunyange yakaderera coluracetam dosage.
(4) Deredza Kurapa-Kuramba Kushungurudzika
Tsvagiridzo inoratidza kuti coluracetam inowedzerawo marapirwo angangoita kune vanhu vanopikisa anti-depressants.
A phase 2a kuyedzwa kwakaitwa neBrainCells Inc., pane varwere kurwisa anti-kushungurudzika kuti vaedze kushanda kweiyo coluracetam kurwisa kwakanyanya kushungurudzika kusagadzikana (MDD) uye yakajairika kusagadzikana kusagadzikana (GAD). Mhedzisiro yekutanga yakaratidza kuti coluracetam pa 240mg / zuva raive kurwisa MDD neGAD.
(5) Inogona kukurudzirwa Neurogeneis
Neurogeneis ndiyo nzira yakagadziriswa maseru ehuropi matsva akagadzirwa. Kuita uku kwakakosha kune zvese zvinonzwisisika basa uye general brain heath.
Coluracetam inokwanisa kusimudzira neurogenesis asi maitiro ari pasi pechiito haana kujeka. Tsvagudzo inoratidza kuti inogona kuve inoenderana nekugona kwe coluracetam kuwedzera iwo acetylcholine mazinga uye kunyanya mu hippocampus.
(6) Inogona kuvandudza Kurwara Kwepfungwa
Coluracetam inowedzera acetylcholine chiitiko iyo inogona kubatsira vanhu vanotambura Schizophrenia mune iyo enzyme inobatanidzwa muacetylcholine synthesis inowanzo kukanganiswa.
Izvo zvinogona zvakare kuvandudza kudzidza kwevanhu vanorwara kubva kune dzimwe hurema simbi senge chirwere cheAlzheimer.
(7) Dai Kuvandudza Chiratidzo
Coluracetam inonakidza nootropic mukomboni uyo haungowedzere kugona chete asi unogona zvakare kuwedzera chiono chako kuburikidza nekuvandudza kwemavara, nani chimiro kuzivikanwa uye nekuona kwemaziso. Inogona kukurudzira kukura kwemitsipa mukati mevanhu vanobatwa nechirwere chinopera simba chetina.
Vashandisi ve coluracetam vanoona zvakasiyana coluracetam mhedzisiro zvinosanganisira kupenya kwemavara, kusiyanisa kwakasimba, kupinza kwakatarisa kumawere uye marambi achiwedzera kupenya.
(8) Irritable Bowel Syndrome chiratidzo kugadzirisa
Irritable bowel syndrome (IBS) ihosha yakakura kwazvo yemudumbu inoitika nekuda kwehuremu husina kunaka hweoline transporter 1 (CHT1).
Chidzidzo cha 2018 chinoratidza kuti coluracetam inokwanisa kudzora iyo CHT 1 molekyumu nekudaro ichiregedza zviratidzo kana irritable bowel syndrome.
(9) Coluracetam yekuvaraidza kushandiswa
Coluracetam yakanaka inosimudzira inopa uye inopa kuzorora kunzwa zvishoma nezvishoma. Izvo zvave zvichishomekerwa kumutsa mahormone ekukura nekudaro akanaka kune kuvaka muviri. Nekudaro, izvo hazviratidzirwe sesimba rekusimudzira uye saka zvinofanirwa kushandiswa nechinokurudzira chemhedzisiro yepamusoro.
Coluracetam Vs aniracetam, fasoracetam, pramiracetam uye Piracetam. Ndeupi musiyano?
Zvese zviri zviviri coluracetam uye aniracetam ndezvemhuri yeiyo racetam. Iwo ese ari maviri akasimba nootropic supplements. Aniracetam yakatanga kuwanikwa kutanga kwa1970s. Aniracetam inozivikanwa kusimudzira ndangariro uye mamiriro, kuderedza kunetseka uye zviratidzo zvekuora mwoyo pamwe nekuvandudza kutarisa.
Izvo zvose coluracetam uye aniracetam inokanganisa huwandu hweacetylcholine muuropi hwako, dzinosiyana munzira yavanoita nadzo. Aniracetam inotungamira yakananga kuburitsa yakawanda acetylcholine nepo coluracetam sisitimu yekuita iri kuburikidza nemirairo yehukama hwehukama choline uptake maitiro inotungamira kune yakanyanya choline kutora uye kutendeuka kuva acetylcholine.
Uyezve, coluracetam yakaonekwa ichitungamira kwakanyanya kusiana uye inowedzera ruzivo nepo Aniracetam ichitungamira kune rumwe ruvara satellite.
Kunyangwe aniracetam uye coluracetam nootropics vari mameseu ekuvandudza, Coluracetam iri nani musimuko modhiyo pane aniracetam.
Uyezve, vamwe vanoshandisa aniracetam vanotaura yakagadziridzwa kugona. Coluracetam kune rumwe ruoko inovandudza maonero.
Fasoracetam ndiyo nyowani nyowani mumhuri ye racetam. Iyo iri kuvandudzwa seanogona kurapwa kana Attention Deficit Hyperacaction Disorder (ADHD) muvana.
Sezvakangoita coluracetam, Fasoracetam ndeye ingangoita hutano hwehutano nootropic iyo inovandudza ndangariro uye yakajairika yekuziva basa. Ivo vaviri vanowedzera choline kutora iyo inoshandiswa mune synthesis yeacetylcholine.
Imwe yeakanakisa fasoracetam mushini wechiito ndeye kugona kwayo kukwidza GABAb receptors. Iyo GABA receptors inosanganisirwa nekudzidza, kudzikamisa mhedzisiro inobatsira mukuderedza kushushikana uye kushushikana pamwe nekuvandudza kurara.
Aya ma nootropics maviri anogona kunge aine mhedzisiro yakafanana. Nekudaro, chinosiyanisa hunhu ndechekuti, coluracetam inoburitsa acetylcholine pamwero wepamusoro kupfuura fasoracetam. Uyezve, kugona kweColuracetam mukuvandudza mhemo kunoratidzwa mushe asi iyo ye fasoracetam haina kunyatsotsanangurwa.
Kufanana nemamwe marangi, Fasoracetam inoda kushandiswa pamwe chete neakanaka choline sosi yakadai saAlfa GPC. Nekudaro, zvakawoma kuiisa pamwe nezvimwe zvinowedzera. Zvinofadza, coluracetam fasoracetam stack chete ndiro inokurudzirwa.
Pramiracetam ndeimwe yeakanyanya simba ma nootropics kubva kumhuri ye racetam. Iyo ine yakasimba kwazvo ndangariro inovandudza kugona. Kusiyana nemamwe majaho, ayo asinganyanyo shandiswa pazvinhu zvine hutano, pramiracetam inogona kushandiswa pane vanhu vane hutano zvakare.
Kunge coluracetam, pramiracetam inowedzera neurotransmitter muuropi. Nekudaro, kusiyana ne coluracetam kana mamwe marangeti anokanganisa chaiwo neuron receptors, pramiracetam inogona kuvakanganisa vese pamwe nekupesvedzera hippocampus.
Kunyange ivo vese vanogona kuvandudza ndangariro, pramiracetam inopawo zvakanakira kuve zvinokurudzira. Nekudaro, coluracetam inopawo imwezve rubatsiro kubva kune pramiracetam yekudzora kushushikana uye kuwedzera mweya.
(4). Coluracetam vs. Piracetam
Piracetam ndiyo yekutanga nootropic kuvezwa uye yakasimba pakati pemamwe ma nootropics mukirasi ye racetam. Piracetam inoshanda inonzwisisika inowedzeredza kunyanya kune vakwegura uye vanhu vane kungwara kushomeka. Nekudaro, zvinogona kuve zvisiri kubatsira kune hutano vanhu.
Nepo vari vaviri piracetam uye coluracetam vachisimudzira iwo chikamu cheacetylcholine muuropi maitiro avo ezviitiko anosiyana. Piracetam inoita acetylcholine receptors inonyanya kubata acetylcholine, nepo, coluracetam inowedzera kushandurwa kwe choline kune acetylcholine nekufurira yakakwirira kubatana choline kutora maitiro.
Coluracetam Dosage, Stack, Kuwedzerwa
(1) Coluracetam Dosi
Iyo yezvikafu uye zvinodhaka manejimendi (FDA) inokoshesa coluracetam uye imwe racetam nootropics semishonga mitsva isina kubvumidzwa uye nokudaro hapana chiyero chekoluracetam dosage inotsanangurwa. Mune ino kesi yakakurudzirwa coluracetam muyero yaizotorwa kubva kuzvidzidzo zvechipatara chevanhu asi zvinosuwisa kuti kwakaitwa kutsvagurudzo nevanhu zvidzidzo zvevanhu.
Zvakanaka, zvese hazvina kurasika sezvo akawanda coluracetam ongororo kubva kune vamwe vashandisi kubatsira mukuwana yakakodzera coluracetam dosage. Mushonga unoshanda uri pakati pe5-20 mg pazuva, zvisinei, uchienzanisa coluracetam pamuromo vs sublingual management ipapo iyo dheti inogona kugadzirisa nenzira.
Pakusarudza coluracetam pamuromo vs sublingual dosage, iyo sublingual dosage inofanira kuve yakaderera. Sublingual kutonga chaiko kunosanganisira kuisa coluracetam pasi pe rurimi uye kuitendera kuti inyungudike kuburikidza neganda. Izvi zvinobvumira coluracetam nootropic kuyerera zvakananga kuropa iro rinowedzera coluracetam mhedzisiro.
Vazhinji vashandisi vanoshuma coluracetam dosage ye 20-80 mg zuva nezuva inotorwa mumadhidhi maviri, imwe mangwanani uye imwe masikati.
Nekudaro, yakakwira coluracetam dosage inenge 100 mg zuva nezuva inotorwa katatu yaizodikanwa kuti irape zvakanyanya kushungurudzika kusagadzikana pamwe nehuwandu hwekunetseka kusagadzikana. Mutero unosvika makumi maviri nemakumi maviri nemana mgga inoripirwa katatu zvakashandiswa mukuedzwa pasina kana zvakaipa zvinokuvadza.
Sezvimwe chero zvinodhaka kana zvekudya zvinowedzera, nguva dzose tanga kune yakaderera inoshanda mushonga uye kuwedzera zvishoma nezvishoma sezvingave zvichidikanwa nemuviri wako. Coluracetam inofanirwa kutorwa neiyo yakanaka choline sosi yekutarisira kushomeka kwe choline kunogona kukonzera kutemwa nemusoro.
Racetams uye mamwe ma nootropic supplements anobereka zviri nani mhedzisiro kana akaiswa mukati pamwe nezvimwe zvinowedzera. Racetams inonyanya kuda kutorwa pamwe neiyo yakanaka choline sosi yekudzivirira migumisiro inosangana neisina kukwana choline muuropi senge misoro. Coluracetam haisi mutsauko.
Kana iwe ukafunga iyo coluracetam alpha GPC nootropic stack, chiyero che 300-600 mg zuva nezuva chingave chakakodzera 250-750 mg pazuva reCDP choline yaizobereka zvirinani mhedzisiro inotora ne 10-20 mg ye coluracetam zuva nezuva.
Coluracetam inomira zvakanaka nezvakawanda zvinowedzera zvinosanganisira, phenylpiracetam, tianeptine, noopept, modafinil, pramiracetam, piracetam uye oxiracetam pakati pezvimwe nootropics.
Sezvo kuisa mukati kunogona kuve kwakanyanya sezvo coluracetam inopa nzvimbo yekuedzwa, funga nezve stack iyo inowedzera zvakanyanya kuchenjera kwako kushanda apo ichikurudzira hukuru hwepfungwa uye hwemuviri simba pamwe neanopokana choline kushomeka. Zvakadai sehombodo dzinosanganisira coluracetam oxiracetam stack, coluracetam fasoracetam stack pakati pevamwe.
Muenzaniso weiyo yakazara coluracetam oxiracetam stack iri
20 mg coluracetam - yekutanga inonzwisisika inowedzera
200 mg oxiracetam -inopa synergetic mabhenefiti ane coluracetam
200 mg caffeine- kuita senge inomutsa
400 mg L-Theanine-kukurudzira zororo
300 mg yeiyo choline sosi yakadai seAlf GPC supplement
(3) Coluracetam Kuwedzera
Coluracetam inowedzera inogona kuwanikwa yehando fomu ye coluracetam powder, mvura inowanzo torwa nyore nyore sublingally uye zvakare se coluracetam macaps.
Kune nzira huru dzekuti coluracetam inogona kutorwa sei ie coluracetam pamuromo vs sublingual manejimendi. Sublingual kutonga kwakanyanya kunoshanda pane muromo. Kana chiwedzerwa chacho chakaiswa pasi porurimi chinopinda chakananga mukati meropa nokudaro chakakurumidza uye nyore kutora.
Coluracetam yakakurumbira yebasa rayo rekutanga mukuvandudza ndangariro uye kudzidza pamwe chete nezvimwe zvakanakira sekuvandudza kuona, kuderedza kushushikana uye kwakanyanya kushungurudzika kusagadzikana pamwe nekurapa isiri kutsamwa.
Coluracetam inoshanda zvakanyanya nekuwedzera acetylcholine mazinga muuropi. Imwezve nzira yekuwedzera kweiyo coluracetam inotora choline-yakapfuma chikafu senge mazai, chiropa, nyama yenyama uye nyama yehuku, broccoli pakati pevamwe.
Vazhinji vashandisi ve coluracetam vanozvisunga neakanaka choline sosi senge CDP-Choline kana Alfa-GPC kukwidziridza miganho ye coluracetam uye kuderedza mhedzisiro.
Coluracetam is-fat-soluble nootropic nekudaro inoda kutorwa nemafuta ane hutano senge mafuta asina kubikwa ekokonati, kana imwe mhandara yemafuta omuorivhi kuti inyatsotora mafuta.
Mhedzisiro Mhedzisiro & Kudyidzana
Coluracetam yakachengeteka uye yakanyatsoregerera nootropic poda iyo yakashandiswa isina kukonzera zvakaipa mhedzisiro. Nekudaro, zvimwe zvinyoro kusvika zvine mwero mhedzisiro zvakataurwa. Mhedzisiro ye coluracetam inowanzoitika kana paine overdose.
Izvi zvinogoneka coluracetam mhedzisiro inosanganisira;
Misoro: Izvi zvakajairika nemarangi ese nekuda kwekuwedzera kwekushandurwa kwe choline kune acetylcholine. Kusakwanira choline muuropi kunowanzoguma nekukanda mumusoro mune zvikamu zveuropi. Vamwe vashandisi ve coluracetam vakaudza misoro. Izvi zvinogadziriswa nekurongedza neakanaka choline sosi uye zvakare kudzikisa dosage.
Brain fog: izvi zvinongoreva kushayikwa kwekutarisa uye kuvhiringidzika. Vamwe vashandisi ve coluracetam vakashuma manzwiro ekusagadzikana pamwe nekushaiwa kwekutarisa. Nekudaro, izvi zvinowanzo nyangarika nekushandiswa kwakashandurwa kwe coluracetam kurudyi dosage.
Kuderera kwemamiriro ekunze: Uku kupesana kwemabhenefiti mabhenefiti. Kunyange ichizivikanwa seyemweya inowedzera vamwe vashandisi veiyo coluracetam vanoona yakaderera mhembereko pakutanga uye zvakanyanya nehupamhi doses. Neraki, kuderedza iyo dhigiri kunogona kubatsira mukuvandudza mamiriro pamwe nekuishandisa pamwe chete zviri nani musimudziro musimbisi.
Nusea: kana coluracetam inotorwa muwedhi pamusoro peimwe inogona kusangana nemutsotsi.
Kurara kwemasikati: Iyo overdose inogona kuderedza yako nhanho yekusvinya kunyange mukati mezuva.
Mamwe coluracetam mhedzisiro yakacherechedzwa ndeyekutsamwisa, kunetseka, kufunga kuzviuraya, uye kumwe kurara kwehusiku kukanganiswa.
Nhau dzakanaka ndedzekuti izvi zvese coluracetam mhedzisiro zvinodzivirirwa ne;
Kuishandisa iyo ine choline sosi,
Uchishandisa mushonga wakakurudzirwa,
Kutora supplement mangwanani nemasikati,
Kutora mvura yakakwana.
vamwe coluracetam kudyidzana zvave kutaurwa uye nokudaro mumwe anofanirwa kuve anochenjera zvakanyanya kana uchifunga nezvewedzero iyi. Kutaura nachiremba wako kunorayirwa zvikuru kuti uchengetedze iwe uine ruzivo nezvekudyidzana chero kupi zvako kwezvinodhaka uye zvakare mune sarudzo dzekudya kwako kwekuwedzera.
Pazasi pane zvimwe zvekudyidzana;
Coluracetam inogona kukanganisa kushanda kwemishonga yeanticholinergic, kusanganisira mishonga yaParkinson, Benadryl, uye mamwe ma antipsychotic.
Coluracetam is cholinergic supplement uye nekudaro inogona kuwedzera mhedzisiro yemishonga ye cholinergic, yakadai seAlzheimer's uye glaucoma drug.
Iyo inogona zvakare kukanganisa iyo NMDA receptor zvinodhaka, senge mushonga wechirume uye anesthetics.
Clinical research & Mushandisi ruzivo
Coluracetam kliniki kutsvaga
Kuedzwa kwekiriniki kwevanhu nezve coluracetam kune mashoma kune kumwe kuitiswa kwakaitwa neBrain Cells Inc. kudzidza kwacho kwakabatanidza vanhu vanopfuura zana vari kurwara nekusagadzikana kukuru uye kushushikana kwakazara. Mhedzisiro yekutanga inoratidza kuti coluracetam yaive nezvimwe zvingave zvakadaro hazvo, ivo havana kuvandudza iyo yekuwedzera.
Kunyangwe coluracetam ichive nyowani nyowani yedzero uye ine vanhu vashoma zvidzidzo vamwe vashandisi vamwe vanotaura zvimwe zvakanaka pamwe nemhedzisiro. Zvimwe zvezviitiko zve coluracetam zvakataurwa ndezvekuti;
Kununurwa kubva kunetseka
Kuvandudzwa kwemafungiro ekuona
Kuvandudza kuverenga kunzwisisika uye wakasununguka kuyeuka
Nekudaro, zvimwe coluracetam wongororo ratidza mimwe mhedzisiro:
Kuvhiringidzwa kwekurara kweusiku
Nekuda kwekushayikwa kwesayenzi kumashure-kumusoro kweiyo yepamusoro coluracetam mhedzisiro, tinokupa zano kuti ubvunze wako mupi wekuchengetedza wezvekurapa usati watora zvinowedzera.
Ndiani anogona kushandisa coluracetam?
Coluracetam poda kana mhinduro yakanakira munhu wese angade kukohwa ayo akasiyana siyana. Nekudaro, vanhu vane zvimwe zvinetswa nezvekurapa vakaita seParkinson chirwere, uye zvakare vakadzi vane pamuviri vanorayirwa kuti vasashandise ichi chekuwedzera.
Vanhu vanotambura nekushomeka ndangariro nekuda kwezvikonzero zvakaita senge zera uye kurwara senge Schizophrenia neAlzheimer kusagadzikana pakati pezvimwe zvinokanganisa ndangariro zvinokonzeresa zvinhu, vanogona kubatsirwa necoluracetam supplement.
Coluracetam poda inokodzera vanhu vanotambura nekushushikana uye kushungurudzika sezvo ichigona kukwidzirisa mhemo uye kugona kufunga. Iyi coluracetam inowedzera acetylcholine muuropi, inosimudzira ndangariro uye kutarisa. Coluracetam yekunetseka sarudzo yakanaka.
Coluracetam zvakare yakanaka yekuwedzeredza kune vanhu vari kuda kuvandudza maonero. Ichi chinowedzera chinobatsira munhu kuona zvakajeka nekuvandudza kuona, kuwedzera musiyano nemwenje kuti uve wakajeka. Iyo yakave ichionekwa zvakare kuti inowedzera kugadzirisa kweakakanganisika retinal uye optical nerves.
Coluracetam poda kana fomu yayo yemvura ndeye yakasarudzika yakanaka yevadzidzi. Iyo inokwanisa kusimudzira kunzwisisika uye yemahara kufona nokudaro inogona kugadzirisa basa.
Vavaki vemuviri havana kusiiwa kunze sezvo ichi chirevo chinogona kubatsira pakuvaraidza chiitiko chinowedzera zororo uye kuvaka muviri.
Iko Kutenga Coluracetam?
Coluracetam inotengeswa inowanikwa zviri nyore pamhepo. Kana iwe ukafunga nezvekutenga coluracetam yekutengesa kana yekushandisa pachako, nyatsotarisa kune vane mukurumbira vatengesi online. Sezvo ichi chiwedzerwo chitsva chitsva kwete makambani mazhinji ari kupa coluracetam yekutengesa uye saka anogona nyore kusarudza kubva kune dzimwe nzira dzinowanikwa.
Coluracetam inhengo itsva yemhuri yemhuri uye yakawana mukurumbira nekuda kwekugona kwayo kuita basa rekuziva, pamwe nekuvandudza maziso.
Iyo yakanyanya coluracetam sisitimu yekuita iri kuburikidza nekufurira yakakwirira kubatana choline uptake (HACU) maitiro. Izvi zvinoita kuti zvive zvakasarudzika uye zvakatanhamara pakati pemamwe racetam sezvo chete phenylpiracetam ine iyo yakafanana machisi.
Icho chokwadi chechinhu ndechekuti miviri yedu haiite Coluracetam zvakasikwa. Nekudaro, kana mumwe achifanirwa kuona iyo coluracetam mabhenefiti saka inofanira kubva kune ayo ekuwedzera.
Kunyangwe zviedzwa zvishoma zvevanhu zvakanyorwa maererano nezvezvakawana kubatsira, nhamba yakanaka yevanhu vakambozviyedza vakataura zvimwe zvakanaka.
Coluracetam yekushungurudzika uye kusagadzikana kwakataurwa mukiriniki kuyedzwa uye izvi zvinoita kuti zvive zvakanaka mukwidzirizve kuongororwa kuti zvionekwe zvakataurwa zvakanakira.
Nekuda kwehuremu hwevanhu zvidzidzo neichi chiwedzerwa, mhedzisiro inogona mhedzisiro haina kunyatsotsanangurwa, zvisinei, musoro wenyaya iri nyaya yakajairwa nemarangi.
Kugadzika coluracetam neine choline sosi inorayirwa kuti ibvise mhedzisiro inoitika nekuda kwekushomeka kwe choline sekurukwa kwemusoro. Chinyorwa chakadai chinosanganisira coluracetam alpha GPC stack uye coluracetam CDC choline stack.
Coluracetam is-fat-soluble compound saka kuti ive nyore kunyura mumasokisi inofanirwa kutorwa nehutano hwakakwana mafuta / mafuta senge mafuta asina kubikwa ecoon, kana mamwe mafuta omuorivhi asina mhandara.
Coluracetam inonyura zvakanaka pamwe nehumwe racetam uye zvakare zvimwe zvinowedzera. Mienzaniso yezvakadai coluracetam stack ndeye coluracetam oxiracetam stack uye coluracetam fasoracetam stack. Izvi zvinopa mukana wekuwedzera kutsvaga mu coluracetam uye zvimwe zvigadzirwa. Coluracetam isina noopept inogona kuve inowanika synergistic musanganiswa wekuvandudza ndangariro uye kuziva basa.
Uyezve, coluracetam sekunge pamwe nemamwe mauto ari kuwedzera acetylcholine mazinga apo kuderera choline kwazvino. Izvi zvinogadzira stacking coluracetam ine yakanaka choline sosi yakadai seCururacetam Alpha GPC stack.
Miedzo yekiriniki yakawanikwa iripo kuti isimbise iyo coluracetam inobatsira pamusoro pazvo zvakawanda zvakavanzika zvecoluracetam zviitiko zvinokurudzira izvo zvinogona kubatsira. Izvi zvinoratidza kuti kutsvakisisa kutsvakwa kunodiwa kuti uone izvi zvakanaka.
BrainCells Inc. yakavharira pasi saka coluracetam yakavhurika rezinesi yekuenderera mberi nemakiriniki.
Coluracetam kuwirirana nemamwe madhiraivha zvakare iri nzvimbo inoda kuenderera mberi nekuongororwa.
Akaike A, et al. (1998). Inodzivirira mhedzisiro yeMKC-231, chinyorwa chakabatana chakabatana choline chinosimudzira, pane glutamate cytotoxicity mune cultical cortical neurons. Jpn J Pharmacol.
Bessho, T., Takashina, K., Tabata, R., Ahshima, C., Chaki, H., Yamabe, H., Egawa, M., Tobe, A., & Saito, K. (1996). Mhedzisiro yenyaya yepamusoro kubatana choline inotora inowedzera 2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) -N- (2,3-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro [2,3-b] quinolin-4- yl) acetoamide pane kushomeka kwemvura maze kudzidza mumakonzo. Arzneimittel-Forschung, 46(4), 369-373.
Murai, S., Saito, H., Abe, E., Masuda, Y., Odashima, J., & Itoh, T. (1994). MKC-231, inogadzirisa choline inowedzera, inogadzirisa kushanda kwekuyeuka uye yakaderedza hippocampal acetylcholine inosimudzirwa ne ethylcholine aziridinium ion mumakonzo. Chinyorwa cheNeural Transfer, 98 (1), 1 - 13.doi: 10.1007 / bf01277590.
Shirayama, Y., Yamamoto, A., Nishimura, T., Katayama, S., & Kawahara, R. (2007). Kuenderera mberi kwekuratidzira kune choline inotora inosimudzira MKC-231 inopesana ne phencyclidine-inokonzeresa kushomeka kwehunhu uye kuderedzwa kwe septal cholinergic neurons mumakonzo. European Neuropsychopharmacology, 17 (9), 616-626. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2007.02.011.
BrainCells Inc. Inozivisa Mhedzisiro kubva kuKuongorora Phase 2a Trial yeBCI-540Yakachengetwa munaNovember 21, 2011, paWayback Machine.
RAW COLURACETAM PODA (135463-81-9)
2. Chii chinonzi Coluracetam?
3.Coluracetam mashandiro ekuita
4 Zvakanakira Coluracetam
5.Coluracetam Vs aniracetam, fasoracetam, pramiracetam uye Piracetam. Ndeupi musiyano?
6.Cururacetam Dosage, Stack, Kuwedzera
7.Side Mhedzisiro & Kubatana
8.Clinical research & Mushandisi Chiitiko
9.Ndiani anogona kushandisa coluracetam?
10.Kupi Kwekutenga Coluracetam?